Daawo: Sanbaloolshe oo shaaciyey beesha uu ra’iisul wasaaraha la rabo – Soomaali 24 Media Network
Daawo: Sanbaloolshe oo shaaciyey beesha uu ra’iisul wasaaraha la rabo
Posted on September 7, 2020 Leave a Comment on Daawo: Sanbaloolshe oo shaaciyey beesha uu ra’iisul wasaaraha la rabo
Taliyihii hore ee hey’adda Nabad sugidda Cabdullahi Sanbaloolshe oo hadal ka jeediyey xaflad qado sharaf ah oo siyaasiyiinta beelaha Hawiye ay u sameeyeen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa beel weynta Hiraab inay iska dhaafaan raadinta jagada Ra’iisul wasaaraha.
Cabdullahi Sanbaloolshe ayaa sheegay in jagada ra’iisul wasaaruhu ay calaf beeshay, balse hadda loo baahanyahay in laga hadlo sidii doorasho dalka uga dhici laheyd, intii ra’iisul wasaare hadda la magacaabay uu xujo kale la imaan lahaa.
“War ra’iisul wasaarahaan waa caraf-beelay, niman Hiraab la yiraahow, dalkaan calooshiinow ku jiraa, iska dhaafa ra’iisul wasaaraha, doorasho aan ka hadalno iyadaa loo baahanyehee, ra’iisul wasaarahan soo socdana lama rabo inuu talada dalka qeyb ka noqdo, hadhowna mar-marsiiyo kale iyo waqti dheeraad ah isiiya iyo xujow noola imaanayaa ee hadda aan iska dhaafno” ayuu yiri Sanbaloolshe.
Isagoo sii hadlaayey ayuu yiri, “Ra’iisul wasaaraha Hiraabow iska dhaafa reer Hiiraan ayaa la siinaa, adinkoo Hiraabana ku tartama madaxtooyada, waxaana soo jeedinaa si nabad loo helo Jaaljecel hala siiyo ra’iisul wasaaraha, Farmaajo intaas haloo sheego.”
Cabdullahi Sanbaloolshe ayaa madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland kula dardaarmay in markii doorashada laga hadlaayo ay doodooda ka bilaabaan goorma ayaa la qabanayaa doorashada, maadaama uu waqtigu yahay midka u muhiimsan.
“Markii laga hadli doono doorashada see loo qabanaa haka bilaabinina ee ka bilaaba goormaa la qabanaa, sababtoo ah waqtiga ayaa ana noo muhiimsan, nooma muhiimsana sida loo qabanaayo, sababtoo ah waqtigaa go’aaminaaya sida loo qabanaayo” ayuu yiri.
← Axmed Madoobe: Muqdisho uma baahna qof warqad ku yimid ee qof sanduuq ku yimid ayey u baahantahay
Shiinaha oo eedeymo culus dusha ka saaray Hindiya →